Shakr: Mamorona horonantsary momba ny orinasanao manokana amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny modely mahavariana | Martech Zone
Shakr: Mamorona horonantsary momba ny orinasanao manokana amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny modely mahatalanjona
Wednesday, May 4, 2016 Sabotsy, Janoary 23, 2021 Douglas Karr
Tena faly aho tamin'ny fandrosoana tamin'ny horonan-tsary tato ho ato. Ny orinasa rehetra dia manana fotoana hiraketana horonantsary ho an'ny orinasany, saingy tsy mora izany. Ankoatra ny kalitaon'ny horonan-tsary, jiro ary feo dia misy ny asa famokarana lahatsoratra izay mandreraka na lafo. Tiako ny manao horonantsary, saingy mirona amin'ny fitorahana bilaogy na podcasting satria mora kokoa io. Mba hahombiazan'ny mpanjifanay dia nanampy azy ireo izahay nanangana studio mba hahafahan'izy ireo mitsambikina eo alohan'ny fakantsary ary hanery fotsiny ny firaketana.
Tsy ny olon-drehetra no manana ny hakanton'ny ekipa horonantsary mankany amin'ny script, firaketana ary fanodinana horonantsary hatramin'ny voalohany. Raha manana ny enti-manana amin'ny fanitsiana horonantsary ianao, tranonkala toy izany Videohive dia tsara amin'ny fizahana sy fitadiavana horonan-tsary ampiasaina amin'ny tetikasanao.
Ahoana anefa raha mahay mandrakitra horonantsary ianao, saingy tsy manana fikasihana mamorona izay mahagaga ny horonan-tsary ny horonan-tsarinao? Izay ny vahaolana izay Shakr dia nanangana. Nanambatra andiana horonan-tsary mahavariana ho an'ny orinasanao izy ireo:
Tadiavo ny horonantsary tianao hampiasaina - azonao atao ny milalao azy manontolo:
Ary avy eo sokafy ny fampifandraisan'ny mpampiasa azy ireo ahafahanao misintona sy mandatsaka ny horonan-tsarinao na ny sary mivantana ao anaty seho. Tsy mila fanovana mandroso, tetezamita, na typografika aza… efa voatendry daholo ny fanondranana horonantsary mahatalanjona.
Tsy mila mandoa ny horonantsarinao ianao mandra-pahaizanao mijery azy manontolo… iray tena mampiavaka ilay sehatra.
Midira amin'ny kaonty Shakr maimaim-poana
Tags: Lahatsary Marketingshakrfanangonana horonantsarympamoaka horonantsaryohatra amin'ny videomodely video
Douglas Karr Wednesday, May 4, 2016 Saturday, January 23, 2021
Ahoana ny fiasan'ny dokam-barotra
CELUM Mandroso ny fitantanana fananana nomerika
May 6, 2016 amin'ny 4: 30 AM
Doug, tiako ny fahitana nataonao momba ny maha-tsara an'i Shakr ho an'ny olona afaka mahazo ny sary, fa mila kitika famoronana ianao hanaovana horonan-tsary mahafinaritra. Ao amin'ny Shakr, tena manohana ny indostrian'ny horonantsary sy fitaovana famoronana horonantsary isan-karazany eny an-tsena izahay. Izaho manokana dia matetika mampiasa Screenflow, Vee for iPhone sy maro hafa. Shakr dia manana vondron'olona mpamorona voasoratra anarana maherin'ny 1,550, maro amin'izy ireo no nanao asa ho an'ny marika lehibe toa an'i Nike, izay manome ny famolavolana horonantsary azon'ireo mpisera Shakr manao horonantsary mahafinaritra amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny sary efa misy sy ny endrika video.